Man United, Arsenal, Roma iyo Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono siddeed dhammaadka Europa League – Gool FM
Xulalka Hungary iyo France oo bar-bardhac ku kala baxay kulan ka tirsanaa koobka EURO 2020… + SAWIRRO
Kooxda Inter Milan oo beddelka Christian Eriksen ka dhex aragta Manchester United… (Waa kee xiddiga ay ka doonayso?)
Cristiano Ronaldo oo taariikh kale oo cusub u sameyn kara xiddigaha qaaradda Yurub…(Afar rikoor oo u gaar ah kahor kulanka caawa uu wajahayo xulka Germany + rikoorka uu doonayo inuu jebiyo)
Horudhac: Spain vs Poland… (Miyuu ciyaari doonaa Sergio Busquets kulanka xulkiisa uu raadinayo guusha koowaad ee Euro 2020?)
Man United, Arsenal, Roma iyo Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono siddeed dhammaadka Europa League
Haaruun April 15, 2021
(Yurub) 15 Abril 2021. Waxaa caawa la ciyaari doonaa kulammada lugta labaad ee wareegga siddeed dhammaadka tartanka Europa League.
Kooxda kubadda cagta Arsenal oo lugtii hore garoonkeeda Emirates barbaro 1-1 ah lagula soo galay ayaa caawa booqanaysa naadiga Slavia Prague, halka Manchester United oo dalka doonto dalka Spain guul 2-0 ah ku soo gaartay ay Garoonkeeda Old Trafford ku soo dhoweyn doonto kooxda Granada.
Kulanka xiisaha badan ee tartankan caawa Europa League laga ciyaarayo ayaa waxaa isku arkaya kooxaha AS Roma oo lugtii hore 2-1 ku soo garaacday Ajax ayaa caawa naadiga reer Holland ku soo dhoweynaysa caasimadda Taliyaaniga.
Kulanka kalena waxa uu dhexyaa Villarreal iyo Dinamo Zagreb, iyadoo lugtii hore ay kooxda reer Spain ku soo badisay 1-0, caawa kulankan waxaa marti loo yahay Villarreal.
Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono lugta labaad ee Siddeed dhammaadka tartanka Europa League halkaan hoose ka eeg:-
10:00 Habeennimo Manchester United vs Granada
10:00 Habeennimo Roma vs Ajax
10:00 Habeennimo Slavia Prague vs Arsenal
10:00 Habeennimo Villarreal vs Dinamo Zagreb
FG: Dhammaan saacadaha ku xusan kulammada tartanka Europa League ee caawa waa xilliga Geeska Afrika.
Horudhac: Slavia Prague vs Arsenal... (Xaqiiqooyinka aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka caawa ka dhacaya Czech Republic)
Isku aadka Afar dhammaadka Champions League oo dhammaystirmay & Taariikhda la ciyaari doono kulammada lagu gaarayo Final-ka